यहोवा परमेश्‍वरको चेतावनी निनवेवासीकहाँ पुग्छ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
योना ४ तर यसले योनालाई अत्यन्त अप्रसन्न तुल्यायो र तिनी निकै रिसाए। अनि तिनले यहोवासँग प्रार्थना गरे र भने, हे यहोवा, म तपाईंलाई बिन्ती गर्छु, के म मेरो देशमा हुँदा नै मेरो भनाई यही थिएन र? यसकारण, म पहिले तर्शीशतिर भागरे गएँ: किनभने मलाई थाहा थियो कि तपाईं अनुग्रही, दयालु, रिसाउनमा धिमा, अति कृपालु र खराबी गर्नबाट मन बदल्ने परमेश्‍वर हुनुहुन्छ। यसकारण अब, हे यहोवा, म तपाईंलाई बिन्ती गर्छु, मेरो जीवन लिनुहोस्; किनभने म जिउनुभन्दा त मर्नु नै बेस हुन्छ। त्यसपछि यहोवाले भन्नुभयो, के तैँले रिस गर्न मिल्छ? त्यसैले सहर के हुन्छ भनी नदेखेसम्म योना सहर बाहिर गए र सहरको पूर्वतिर एउटा छाप्रो बनाएर यसको छहारीमा बसे। अनि यहोवा परमेश्‍वरले एउटा लौका उमार्नुभयो र तिनलाई तिनको क्लेशबाट छुटकारा दिन यसलाई योनाभन्दा माथितिर आउन लगाउनुभयो, ताकि यो तिनको टाउकोमाथि छहारी हुन सकोस्। त्यसैले योना त्यो लौकासँग निकै प्रसन्न भए। तर भोलिपल्ट एकाबिहानै परमेश्‍वरले एउटा कीरा ल्याउनुभयो र यसले लौकालाई खाइदियो र यो ओइलायो। अनि सुर्य उदाएपछि, परमेश्‍वरले भयानक पूर्वीय बतास पठाउनुभयो; र घाम योनाको शिरमाथि पर्‍यो, ऊ मूर्छा पर्‍यो र मर्ने इच्छा गर्दै यसो भन्यो, म त जिउनुभन्दा मर्नु नै उत्तम हुन्छ। अनि परमेश्‍वरले योनालाई भन्नुभयो, के तँ लौकाको निम्ति रिसाउन उचित छ? तिनले भने, म मृत्युसम्म नै रिसाउँछु। त्यसपछि यहोवाले भन्नुभयो, तैँले जुन लौकाको निम्ति न त परिश्रम गरिस् न त त्यसलाई हुर्काइस् तँ त्यसको माया गर्छस्; जुन एकै रातमा आयो र एकै रातमा नष्ट भयो: अनि आफ्‍नो दाहिने हातबाट देब्रे हात छुट्टाउन नसक्ने एक लाख बीस हजारभन्दा बढी मानिसहरू र धेरै गाइवस्तुहरू भएको त्यो ठूलो सहर निनवेलाई मैले बचाउनु पर्दैन र?
“परमेश्‍वरले निनवेलाई मुक्ति दिनुभएको” कथा छोटो भए पनि, यसले परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावको अर्को पक्षको झलक देखाउँछ। त्यो पक्ष के हो सो बुझ्‍नको लागि, हामी धर्मशास्‍त्रमा फर्केर परमेश्‍वरले आफ्‍नो कामको सिलसिलमा गर्नुभएको एउटा कार्यलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।
सुरुमा हामी यस कथाको सुरुवातलाई हेरौं: “अब यहोवाको यसो भन्‍ने वचन अमित्तैका छोरा योनाकहाँ आयो, उठ्, त्यो ठूलो सहर निनवेमा जा र त्यसको विरुद्ध चिच्या; किनभने तिनीहरूको दुष्टता मेरो सामने आएको छ” (योना १:१-२)। धर्मशास्‍त्रको यो खण्डमा हामीले थाहा पाउँछौं कि यहोवा परमेश्‍वरले योनालाई निनवे सहर जाने आदेश दिनुभयो। उहाँले योनालाई किन यो सहरमा जान आदेश दिनुभयो त? यस विषयमा बाइबलले स्पष्ट रूपमा बताएको छ: यो सहरका मानिसहरूको दुष्टता यहोवा परमेश्‍वरको सामुन्ने आएको थियो, त्यसकारण उहाँले के गर्ने अभिप्राय राख्‍नुभएको छ भन्नेबारे तिनीहरूसामु घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले योनालाई पठाउनुभयो। योना को थिए भनी बताउने कुनै अभिलेख नभए तापनि, अवश्य नै, यो परमेश्‍वरलाई चिन्‍ने कार्यसँग सम्‍बन्धित छैन, त्यसकारण तिमीहरूले उक्त मानिस, योनालाई चिन्‍नु आवश्यक छैन। परमेश्‍वरले योनालाई के गर्न आदेश दिनुभयो र परमेश्‍वरले त्यसो गर्नुका कारणहरू के थिए सो मात्रै तिमीहरूले बुझ्‍नु आवश्यक छ।
हामी योनाको पुस्तकको तेस्रो अध्यायको दोस्रो खण्डमा जाऔं: “अनि योना एक दिनको यात्रा गरी सहरभित्र प्रवेश गर्न लाग्दा, तिनले उच्च सोरमा भने, अबको चालीस दिनमा निनवेलाई नष्ट पारिनेछ।” यी वचनहरू निनवेवासीहरूलाई भन्‍नू भनी यहोवा परमेश्‍वरले योनालाई प्रत्यक्ष रूपमा दिनुभएका वचनहरू हुन्, त्यसकारण अवश्य नै, यहोवाले निनवेवासीहरूलाई भन्‍न चाहनुभएका वचनहरू यिनै हुन्। यी वचनहरूले मानिसहरूलाई के बताउँछ भने परमेश्‍वरले त्यस सहरका मानिसहरूलाई तिरस्कार गर्न र घृणा गर्न थाल्‍नुभएको थियो किनभने तिनीहरूको दुष्टता उहाँको नजरमा आएको थियो, त्यसकारण उहाँले त्यस सहरलाई नष्ट गर्न चाहनुहुन्थ्यो। तैपनि, परमेश्‍वरले त्यस सहरलाई नष्ट गर्नुभन्दा पहिले, उहाँले निनवेवासीकहाँ एउटा घोषणा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, साथै तिनीहरूलाई तिनीहरूको दुष्टताको निम्ति पश्‍चात्ताप गर्ने र नयाँ सुरुवात गर्ने मौका दिन चाहँदै हुनुहुन्थ्यो। यो अवसर चालीस दिनसम्‍म रहनेवाला थियो, त्योभन्दा बढी होइन। अर्को शब्‍दमा भन्दा, यदि चालीस दिनभित्र त्यस सहरका मानिसहरूले पश्‍चात्ताप गरेनन्, तिनीहरूका पापहरूलाई स्वीकार गरेनन्, र तिनीहरू परमेश्‍वरको सामुन्ने लम्पसार परेनन् भने, परमेश्‍वरले त्यस सहरलाई सदोमलाई जस्तै नष्ट गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। यहोवा परमेश्‍वरले निनवेका मानिसहरूलाई यही कुरा बताउन चाहनुभयो। स्पष्टै छ, यो त्यति सरल घोषणा थिएन। यसले यहोवा परमेश्‍वरको रिसलाई मात्रै व्यक्त गरेन, बरु यस सहरभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको लागि एउटा गम्भीर चेतावनीको रूपमा काम गर्दै यसले निनवेवासीहरूप्रतिको उहाँको मनोवृत्ति पनि व्यक्त गर्‍यो। यो चेतावनीले तिनीहरूलाई तिनीहरूका दुष्कर्महरूको कारण तिनीहरूले यहोवा परमेश्‍वरको घृणा बटुलेका छन् र यसले तुरुन्तै तिनीहरू स्वयम्‌को विनाश ल्याउनेछ भन्‍ने कुरा बतायो। त्यसकारण, निनवे सहरको हरेक निवासीको जीवन निकट खतरामा परेको थियो।
अर्को: परमेश्‍वरले निनवेवासीहरूका हृदयको अन्तस्करणमा इमानदार पश्‍चात्तापलाई देख्‍नुहुन्छ